I-Semicolon Tattoos Idizayini Yombono Kwabesilisa Nabasetyhini - Tattoos Iingcamango Zobomi
I-Semicolon Tattoos I-Ideal Design For Men and Women
sonitattoo Julayi 3, 2016
Ngaba uyazi isizathu sokuba abantu bahamba ngokuthe ngcembe kwi-tattoos ye-semicolon emhlabeni jikelele? Kukho ukunyakaza! Ewe, intshukumo yokwenza isitatimende esicacileyo nge tattoo esona sizathu esenza ukuba uninzi lwethu luya kulo. Uya kufumana imvakalelo xa uqonda ukuba kutheni le tattoos isetyenziswa namhlanje.
Kwiminyaka ethile edlulileyo, iProject Semicolon yaqalwa ukumela uthando kunye nethemba kwabo balwa nokuzilimaza, ukuxilonga, ukuzibulala nokuxinezeleka. Khawucinge nje ukuba itekisi enje yenza njani abantu banqobe. Siyazi ukuba wonke umntu osebenzisa i-semicolon uyayisebenzisa xa evala izivakalisi.
I-#semicolon tattoo inokuba yincinci kodwa intsingiselo into enkulu. I-tattoo ithatha ingqalelo enkulu kwaye isetyenziswe ukumela umlutha, ukuxinezeleka, ukuzilimaza, ukuzibulala kunye nokuthanda ukuqhubeka nobomi. I-semicolon ithetha ngentsingiselo yobomi, ukuqinisekisa abantu ukuba isiphelo asizange sifike. Namhlanje, i-semicolon ibe yimbolo ye-# tatto ukuba abo banzima ukuhlala basebenzise ukukhumbuza bona banento yokuphila. Kukho ubukhulu obuhlukeneyo balo tattoo kwaye nguwe oya kuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba i-semicolon yakho ibonakale njani. Ekupheleni kosuku, i-semicolon imelela into ebalulekileyo kwaye inenjongo enokuyiqonda.
Abo batyunjweyo bangayinayo le tattoo ukuba baxelele ukuba bakuphi. Umnxeba udidi kunye kwaye unokukhuthaza abantu ukuba balandele amaphupha abo. Unokwenene ufumane ukuphefumlelwa okufunekayo xa uyayine le tattoos emzimbeni wakho. Kuthatha malunga nokongamo lwaloo mntu uyinki. Kuthatha malunga nokuzilawula kunye nokuthetha ngokuvuleka komntu ophethe tattoo.
1. Semicolon yemveli umdwebo we tattoo kumadoda kwi-forearm
Xa usebenzisa i-semicolon tattoos, umyalezo ogqithisayo kukuba uxhasa okanye ulwa nomzabalazo ovela ngaphakathi. Namhlanje, tattoo ye-semicolon isetyenziswe yiyo yonqulo kunye nabantu abangabonqulo abakulungele ukufumana inxalenye engcono yobomi babo.
2. Iimpawu kunye ne-semicolon Umbono we tattoo kumantombazana emagqatsheni
Unokutshintsha inxalenye yakho xa uya kwi tattoos ze-semicolon. I-#design ihle kwaye ukhangeleke ngayo. Ubungcali abuyi kuthatha ixesha okanye ukuhlala ezininzi kwiindawo zesikhumba.
3. I-Heart semicolon inkinobho ye tattoo kubafazi entanyeni
Ngaba ulahlekelwe ngumntu othandekayo kwaye uyazibulala? Ukusetyenziswa kwale tattoo ephakamisa ukuqwashisa emhlabeni jikelele kubantu abalwa nempilo yengqondo kunokufuneka ukuba uqiniseke ukuba unokuphumelela.
4. I-Ankle semicolon Umbono wendlela yokubumba kwintombazana
Zikhuthaze uze udwebe le tattoo eya kuba isikhumbuzo semfazwe omele ulwa nayo ngaphakathi.
5. Semicolon inkinobho ye tattoo kubafazi entanyeni
Ngeempawu ze-semicolon, uthi 'Ndiya kuhamba kunye nobomi bam.' Ukuba unomntu ophelisa impilo yengqondo, unganqikazi ukukhuthaza umntu ukuba ahambe le tattoo.
6. Abathandi i-semicolon tattoo design idea malunga namantombazana
Uyilo lwe-colon yesiqingatha luhluke kakhulu. Kulabo abangakulungele ukwenza isandi esikhulu kunye neendlela zabo zokubhala, bangayisebenzisa ngokulula.
7. Semicolon kunye inkwenkwezi yeenkwenkwezi zembonakalo kubafana
Zisebenzise itekiconon tattoo kwaye ube ngumqhubi.
8. Iingelosi kunye ne-colon taton ink inkino kwi iminwe yabafazi
Ubuhle obuqhotyoshelwe ekusebenziseni le tattoo bunokuchazwa kakuhle xa unayo kwesikhumba sakho.
9. isibini i-semicolon tattoo Ink ingcamango yamantombazana eminwe
Hlonipha abo olahlekelwe ngu tattoo. Unqatshelwe ukuba uphonseke ngeemeko zakho xa ukhangela le tattoo.
10. Ankles i-semicolon tattoo ingcinga yabesifazane
Isigijimi, ubuhle kunye nokuzola okuzisa kumsebenzisi we tattoo kukukhupha ingqondo.
11. Indlebe ye-semicolon inkonkco yowinki yamantombazana
Phuma namhlanje uze uvumelane nawe ngaphakathi ngaphakathi kunye ne tattoos ze-semicolon.
12. Semicolon elula Umbono we tattoo kubasetyhini entanyeni
tattoos zelangatattoostattoo yamehlotattoosi tattooiidotitattoos kubantuzengalo zengalotattoostattoos kumantombazanatattootattoiifatyambo zeentyatyambotattoozinyonitattoosI-Ankle Tattoosihoi fish tattooiifoto eziphakamileyoizithunywa zezuluizigulanei-tattoosTattoos zeJometriowona mhlobo womhloboutywala tattooIintyatyambo zeTattoongombonosibiniIndlovu yeendlovutattoos ezinyawoiifotto zentamongesandladesign mehnditatto tattoostattoos zohlangaIintliziyo zeTattoosiimpawu zezodiac zempawuiipattoostattoo yedayimanitattoos zenyangatatna tattooizifuba zesifubacute tattoosbathanda i tattoosi-cherry ityatyamboicompass tattooukutshiza amathambotattoo engapheliyotatto flower flowerzomculo tattoos